Gazety IFG 005 | Informatika Malagasy
Gazety IFG 005 Posted October 2nd, 2007 by RTN Fanamahirana kely: Efa tonga any madagasikara ny Gazety IFG 005, miaraka amin'ireo boky sy DVD isan-karazany.
Afaka miantso ny mpiandraikitra any an-toerana ( 0 3 3 1 1 7 4 3 1 4 Mahefa) ianao raha hindrana an'izany.
‹ Comment gagner 50€ par jour - Marketing - WebMaster La semaine pour l'emploi (21 au 25 Septembre 2009) › Login or register to post comments
Inona daholo ilay boky sy
On October 3rd, 2007 adler says:
Inona daholo ilay boky sy dvd raha tsy mahadiso ?
Ireto no tadidiko fa i
On October 3rd, 2007 RTN says:
Ireto no tadidiko fa i Mahefa angambany no tena afaka milaza ary rehetra.
- VB .NET professionnel
- Développer avec Visual Studio 2005 Editions Express
- conception et programmation Objet
- pdf magazine programmez
Efa eo ampanomanana ny
On January 14th, 2008 RTN says:
Efa eo ampanomanana ny Gazety IFG 06 izahay izao.
Misy Malagasy malala tanana moa teto Frantsa milaza hanome boky eran'ny boritra momba ny informatique ka hisaorana azy manokana izany.
Ankoatran'ireo dia hisy boky Learning WCF sy Webcast Silverlight izay ao anatin'ny Framework .Net 3.0 Hatao ihany koa ny fandefasana fitaovana isan-karazany toy ny Visual Studio 2008, sy ny maro hafa koa.
Mbola holazaina anao miandalana eto ihany ny vaovao momba an'izany.
Azo atao ve ny mahazo ny
On January 15th, 2008 fraz says:
Azo atao ve ny mahazo ny lisitra rehetra efa any mba hahafantaran'ny rehetra azy ?
Nisy malagasy malala-tanana
On March 19th, 2008 RTN says:
Nisy malagasy malala-tanana izany nanome boaritra maromaro misy boky informatika hoan'ny infogasy any madagasikara, dia hisaorana azy manokana izany.
Mety tsy tonga dia ho lasa miaraka daholo angambany izany fa tsijaraina isaky ny gazety IFG.
i fraz angambany no afaka hilaza antsika ny ao anatin'ireo baoritra ireo satria izy no nandray izany .
Tsy mis tohiny tsony ve ilay
On October 23rd, 2009 Isambilo says:
Tsy mis tohiny tsony ve ilay gazety?
Mahaliana ahy ilay izy.
Miala tsiny fa vaovao be am lay tranokala aho. (Sao mantsy misy fanazavan ihany any fa tsy hitako)
Mitohy ilay izy fa
On October 26th, 2009 RTN says:
Mitohy ilay izy fa natambatra fotsiny miaraka amin'ny Tolotra Boky CD any amin'ny telomiova.
Ny mpiandraikitra moa tsy miova fa i Mahefa ihany, afaka miantso azy ianao raha hindrana boky na CD, sns....
Misaotra am valiny mahafa-po
On October 28th, 2009 Isambilo says:
Tsy dia mino loatra
On November 3rd, 2009 aland15 says:
Tsy dia mino loatra aho hoe : ny Linux no farany, tsy voaisa hoe firy tokoa ny olona mampiasa azy raha ny marina.
Ary raha resaka serveur dia mbola ny Linux ihany no manjaka amin'io. Toa nisy nilaza tamiko tany ho any hoe ny serveur-n'ny Hotmail anie ka Linux no manodina azy e!
Amiko koa ilay izy tsy hoe : ity no be mampiasa dia ho any koa aho, safidy toy ny safidy rehetra ihany io, mety ho antony ara-politika, ara-toekarena, ary ara-tsosialy koa angamba, ara-teknika indrindra indrindra.
Fa raha tena jerena anie ka vitsy ihany ny olona hoe nanomboka nikirakira informatika ka niainga tamin'ny Linux izany e, (afa-tsy ireto zandry katitakely ireto) isika rehetra ireto samy nikatroka MS-DOS daholo taloha, rehefa tafakatra avoavo ny mari-pana dia lasa miketriketrika an'itsy sy iroa dia lasa mahita an'izany Linux izany!
Active forum topics Fanalehibiazana partition / (Linux)SchemeTetik'asa Karaoke Malagasy"Jeux" FANORONA vita malagasyAdobe Flex lasa Open Source ihany koatorohevitraMitady mpahay DELPHI NET Mysql/interbaseKilalao FanoronaWifi manao micro-coupureTsy mety bootable mitsy ny DVD-komore Recent comments diso kely "serveurSalut daolo